Fanamoriana fanamoriana môtô
Izahay dia mpanamboatra fihenan'ny motera
Ny generator dia miteraka hafanana betsaka rehefa mihodina izy hiteraka herinaratra, ary ny rivotra mangatsiaka dia tsy maintsy mandalo eo anelanelan'ny stator sy ny rotor. Noho izany, hisy ny lelan'ny mpankafy amin'ny faran'ny generator. Ny lelan-tsofina haingam-pandeha haingam-pandeha dia tsy maintsy mamoaka ny rivotra mangatsiaka, ary tsy maintsy misy ny any ivelany Ny harato toy ny grid (mikatona anaty boribory ny ankamaroany) dia ny fitaratra fiarakodia, izay miaro ny lelan-tsofina hisorohana ny zavatra tsy hianjera amin'ny lelan-tsofina .
Ny fonosan'ny mpankafy môtô sy ny fonosan'ny mpankafy dia antsoina hoe fonosana mpankafy moto. Misy lahasa roa: 1. Haavo fiarovana IP, toy ny IP54, ny laharana voalohany dia ny fisorohana ny solida tsy hiroboka ao amin'ilay tranga ary hisorohana ny olona tsy hikasika ireo faritra mampidi-doza ao amin'ilay tranga. Ny fitaratry ny fitaratra dia mba hisakanana ireo zavatra vahiny tsy hikasika ny fan. Ny isa faharoa dia maneho ny fahaizan'ny fiarovana ny ranoka. 2. Fehezo ny fantson-drivotra. Satria ny mpankafy dia mihamangatsiaka, raha misy fitaratra, dia hitsoka hatrany amin'ny faran'ny D ny fiaran-drivotra manelanelana ny elanelana (fizarana manodidina) eo anelanelan'ny fitaratra sy ny fantson'ny hafanana, amin'izay dia manaisotra ny hafanana avy amin'ny fantsom-panafana. Raha tsy misy fitaratra, dia tsy misy lalana mankany amin'ny rivotra ny mpankafy, ary mahantra izaitsizy ny vokatry ny fanaparitahana ny hafanana.
Na izany na tsy izany, ilaina ny mifidy antsika!
Izahay dia orinasa mamokatra vokatra mpankafy mpankafy moto. Taorian'ny fampandrosoana nandritra ny taona maro, nahazo ny fitokisan'ny mpanjifa raikitra marobe ny orinasa amin'ny alàlan'ny vokatra avo lenta sy serivisy tena tsara. Taona maro niainana tamin'ny famokarana dia ny manome anao vokatra tsara.
Hatramin'ny niorenany dia nifikitra hatrany tamin'ny fitsipika fitantanana mifantoka amin'ny talenta ny orinasa, nanangona elitin'ny indostria, nanambatra teknolojia fampahalalana vahiny mandroso, fomba fitantanana ary fiasa amin'ny orinasa miaraka amin'ny zava-misy manokana an'ny orinasa an-trano hanomezana vahaolana feno amin'ny orinasa.